भारतमा ११ करोड ६४ लाख बढीको कोरोना परीक्षण « MNTVONLINE.COM
MNTV Kathmandu Bureau
भारतमा ११ करोड ६४ लाख बढीको कोरोना परीक्षण
एजेन्सी । भारतमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमितको संख्या शुक्रवारसम्ममा ८० लाख ८८ हजार नाघेको छ । भारतीय स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा ४८ हजार ६४८ जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन् भने ५६३ जनाको मृत्यु भएको छ ।
मन्त्रालयकाअनुसार कोभिड–१९ बाट संक्रमितमध्ये करिब ७३ लाख ९४ हजार व्यक्ति संक्रमणमुक्त भएका छन् । कोभिड–१९ को संक्रमणबाट हालसम्म १ लाख २१ हजार ९० जनाको मृत्यु भएको छ । केही दिनदेखि नयाँ संक्रमित र मृत्यु दरमा निरन्तर कमी आएको छ ।
भारतीय स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले कोरोनाभाइरस सक्रिय संक्रमित व्यक्तिको संख्या ५ लाख ९४ हजारको हाराहारीमा रहेको जनाएको छ । परिषदका अनुसार देशव्यापी कोरोना परीक्षण संख्या ११ करोड ६४ लाख रहेको छ ।
पाँच जना केन्द्रीय मन्त्रीलाई कोरोना संक्रमण
युरोपियन च्याम्पियन्स लिग- बार्सिलोना र चेल्सी अन्तिम १६ मा
पेस्तोलसहित क्याम्पसका लेक्चरर पक्राउ
शुरु नै नभई सकियो मनाङको शैक्षिक सत्र, परीक्षा कसरी दिने भन्ने विद्यार्थीको चिन्ता
आफ्नै ट्रकले किचेर साहुको मृत्यु
सप्तरीका कोरोना संक्रमितको धरानमा मृत्यु !
बाँदरको शिकार खेल्न गएका राउटे किशोरको मृत्यु !
बालिका हत्या प्रकरणः तनाव बढेपछि बर्दिबासमा कर्फ्यू !
लोकतन्त्रमा कुनै पनि पार्टी फुट्नुहुन्नः बाँस्कोटा !